Abaningi kithi uthanda ukukudla kancane ushukela ne itiye noshukela. Ngenxa yalesi kufanelekile akuyona elula, elicwengiweyo futhi abilisiwe ushukela Indlela kahle elula. Lokhu dish esingazilungisa ngisho ingane yakho, akukho nobunzima lapha. Futhi uma wengeza ukuba iresiphi okuzenzela ujamu ushukela omisiwe amabhilikosi omisiwe, orange ikhasi noma ukhokho, uzothola ubumnandi okukhulu etafuleni lakho nge ukunambitheka enkulu.
Indishi zaphumela at wena endleleni kwakufanele abe - matt, uju, kubaluleke kakhulu banamathela iresiphi. Uma kungenjalo, ungase uthole candy ecacile esikhundleni ushukela abilisiwe, okuyilona elisebenzayo futhi simnandi kakhulu, kodwa kungcono umkhiqizo ohluke ngokuphelele. Khumbula ukuthi ushukela abilisiwe, iresiphi zazo usuwenze ngokucophelela nge, kufanele kube crystalline futhi opaque.
Ubisi noma ukhilimu?
Omama abaningi abasemakhaya uncamela ukwenza ushukela abilisiwe ngobisi. Iresiphi for ekuwulungiseleleni kuyafana emanzini. Ubisi ukunika umkhiqizo flavour obucayi xaxa.
Uma ukupheka ushukela emanzini, khona-ke isidlo libizwa mafutha. Ushukela nobisi - kuyinto okunama-kilojoule amaningi futhi umkhiqizo olubucayi. Kukhona inketho ukupheka njengoba ushukela abilisiwe phezu ukhilimu. Indlela efanayo ubisi noma mafutha. Kodwa ukhilimu omuncu kunikeza ukukhanya mnandi dessert yakho. Ngaphezu kwalokho, kuye ngokuthi okuqukethwe amanoni ukhilimu omuncu, isidlo Kuyophumela ethubeni ngisho inomsoco ngaphezu kwe-ubisi.
Indlela ushukela abilisiwe ekhaya ulula. Ngakho, kudingeka silungiselele kule mikhiqizo:
1 kg ushukela;
isigamu inkomishi yobisi;
ikhasi 1 orange.
Yilokho. Khumbula ukuthi ubisi kungenziwa ngokuzikhethela sithathelwe indawo amanzi, ukhilimu amafutha noma ukhilimu (esilinganayo).
orange zami ezinhle, Sula sisuse ikhasi. Zama uyigcine ukunambitha ezibabayo. Ezinye zalesi Isithelo exotic has ukunambitheka ababayo, okuyinto thina ngokuphelele akudingeki, futhi ezingonakalisa ngisho ukunambitheka.
Fake usike ikhasi. Uma wayefisa, ungakwazi ukukuthinta orange on a grater indawo. Noma enye indlela - nastrigaem ikhasi ekhishini sikelo.
Ngakho, ukulungiswa imikhiqizo ngomumo.
Siqala ukupheka ushukela abilisiwe ubisi. Recipe ngezithombe ukukusiza uqiniseke ukuthi wenze yonke into efanele.
Ukuze uqale nge efudumele up epanini ukuthosa phezu emlilweni ophansi. Lapho-ke nendlu yaqala ukufudumala, uthele ingxenye ubisi uthele ushukela. Uma ufisa, ungakwazi ukwengeza isidlo ambalwa wezipuni ibhotela.
Lapha ingxube abilayo ibila. Ungakhohlwa ugovuze njalo kukho hhayi kuvuthe futhi ubilise ngokulinganayo. Lolu ketshezi ngeke kancane shabalala noshukela wakho uqala ukuthola isakhiwo okuxekethile. Kubalulekile kakhulu ukuba overdo isidlo phezu komlilo, ngakho-ke kungaqali igcwale amanzi futhi jikisa candy.
Uma ubona ukuthi ushukela uqala ensundu, uthele ubisi ezisele (noma ukhilimu), kanye ngamathumba kancane. Futhi kuphela kwaze kwaba sekupheleni impela udinga ukwengeza peels orange.
Abilisiwe ushukela ubisi, iresiphi of okuyinto eboniswe ngenhla, kubalulekile hhayi kuphela ukulungiselela kahle, kodwa ayikho ngaphansi cool kahle.
Udinga ukulungiselela ipuleti ezijulile noma isitsha. Amafutha odongeni uwoyela Cookware zemifino. Kulo msebenzi Kalula okuphekiwe umkhiqizo ashisayo.
Shiya isitsha ohlangothini bese ulinda Ukupholisa ephelele. Akubalulekile ukuba ugcine isikhathi ukuwasha izitsha esiqandisini. Ake ke kwenzeka kancane kancane, emazingeni okushisa okuvamile.
Lapho ushukela uye selehlile ngokuphelele, phendukisela ipuleti, ngomusa uthepha kuso, futhi isiqeshana lula fall out. Manje ungakwazi ukugqashula ushukela izingcezu - ke isilungele ukusetshenziswa.
Enye - nje walala phezu phansi endishini waba iphepha, okuyinto futhi kufanele ezinamafutha akahle. Kulokhu, ukuze uthole ushukela selehlile kusuka ethangini kuyoba lula ngisho.
Yini ukwengeza ukunambitha
Abanye besifazane kukhona bayaphikisana obusolisayo - ungakujabulisi ushukela abilisiwe, iresiphi elula ngenxa yokulimala. Nokho, kulabo abasebenza a izitsha eziyinkimbinkimbi, kukhona inala ongakhetha.
Izithako ezilandelayo zingase wanezela:
amabhilikosi omisiwe ;
Konke lokhu izingxenye kufanele ifakwe ekupheleni ukupheka. Ungakhohlwa omisiwe cwilisa amanzi abilayo for isigamu sehora ukuze zanda.
Kodwa njengoba ukhokho ke kufanele wanezela ekuqaleni ukupheka. Kuyokunikeza isidlo sakho esihle ushokoledi umbala i ukunambitheka ongenakulibaleka. Omunye amakhilogramu ushukela, uzodinga akukho kuka 2-3 wezipuni of nokhokho oyimpuphu.
Nuts kuyinto efiselekayo nquma kahle, kodwa uma uthanda izingcezu ezinkulu, bese siyishiya ngendlela esilindele yakho.
ezinye umehluko wemisindo nemiqondo yamagama
Esikhathini kulungiselelwa lokhu isidlo kubalulekile sicabangele ezinye umehluko wemisindo nemiqondo yamagama, ukuze bonakalise umkhiqizo. Ngakho:
Pan ukuthatha esifushane, kodwa ububanzi, ngakho ushukela kahle evuthayo ngokulinganayo.
Thatha isikhathi sakho futhi akufaki umlilo omkhulu.
Ukuze uhlole ukuthi isidlo usulungile, ubeke iconsi ashisayo ushukela esanele ipuleti. Uma uye selehlile phansi bese uba okuqinile - isidlo usulungile.
Ibhotela uzokwenza dessert yakho ukunambitheka obucayi xaxa. Ngaphezu kwalokho, kuyokusiza ugcine isakhiwo umkhiqizo crystal.
ushukela ebilisiwe, uma uye selehlile, ungakwazi ezinqumela aphule, kodwa ungakwazi uthathe cubes. Awunayo ulinde umkhiqizo wokugcina kuyoba abandayo. Uma bayakwazi ukuthatha yona esandleni, ngaphandle ingozi ukubanjwa ashisiwe, uqale ahlabayo. Ukuze wenze lokhu, thatha ummese nge serrated, nquma ukuthi usayizi ofuna ukubona izingcezu ushukela, futhi aqale ukusika.
Abilisiwe ushukela iresiphi silula, izingane zijabule abathanda ukupheka. Futhi kufanele usebenzise. Phela, kuyajabulisa ukuphathisa ingane yakho umsebenzi "ezibaluleke", bese ndawonye naye ukuzama esikuthole.
Ngaphezu kwalokho, ingane yakho ngeke kube uyaziqhenya uma ukupheka ushukela abilisiwe, bese sibaphathe abangane babo ngokwethukela.
By endleleni, lokhu dish kungenziwa ehlotshiswe izithelo fresh. Ukuze wenze lokhu udinga begeza apula noma amaganandoda, amajikijolo ahlukahlukene. izithelo ezinkulu uthathe yizicucu amancane. Lapho ushukela ubiliselwe cool, kodwa usazoba athambe kahle ibenze kuye izithelo kanye amajikijolo, kangangokuba kungabikho muntu owake isigamu wangena shí dessert, kanti eyesibili wahlala phezu kwamanzi. Kuyinto enhle kakhulu futhi original, futhi okumnandi. Minus eyodwa kuphela - ne ukwengeza fresh ushukela abilisiwe asifanele isitoreji yesikhathi eside, Kufanele udliwe kungakapheli usuku olulodwa noma ezimbili.
Ukupheka imifino ilayisi multivarka
BBQ engavamile - nice and elikhanyayo
AbaPhathi nabaPhathi ukudlula "Mafia"
"Cerruti 1881" - iphunga, owesifazane oziphethe kahle